Jirichaa nzipu gi site na ahia igwe ojii bu ozi nnabata | Martech Zone
Jirichaa nziga gị na ngwugwu nyocha Sender Cloud
Monday, December 28, 2020 Tọzdee, Disemba 29, 2020 Douglas Karr
Imirikiti ụlọ ọrụ na-ezipụ ozi-elelị na-elelị etu ihe mgbapụta ọ bụla nwere ike isi metụta nzukọ ha. Email mara mma, nke ewuru nke ọma, ma nwee ọfụma nwere ike ịdaba na folda junk nke onye debanyere aha ma chọọ ịgbanwe na ụlọ ọrụ gị. Nke ahụ bụ ọnọdụ jọgburu onwe ya ịnọ na ya.
Ọbụna nke ka njọ, ị nwere ike ọ gaghị amata na a na-ebugharị ozi ịntanetị gị na junkuru belụsọ ma ị na-eji ihe igbe nlekota igbe. Nkwado m maka nke a bụ ndị mmekọ anyị na 250ok, onye m na-ejikwa nyochaa igbe ntinye m. Ha na-eme nke a site na ịnye ndepụta mkpụrụ ma nyochaa igbe igbe ndị ahụ, wee kọọrọ gị ma email gị ọ mere ka ọ bụrụ onye na-eweta ọrụ Internetntanetị ọ bụla.
Enwere ike imetụta aha email gị site na ọtụtụ nsogbu, mana imirikiti ọ na-agbadata isi ise:
nhazi - na-ahazi ngalaba gị na sava email ka ISP nwee ike ịchọpụta na ozi ịntanetị na-abịa site n'aka ụlọ ọrụ gị?
List - adreesị email gị emelitere, dị irè, ma họrọ n'ime email gị? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ohere nke ịbụ ndị a kọrọ dị ka SPAM dị elu karịa
Ntughari - ezigara IP amara maka izipu SPAM site na akụkọ na-enweghị isi? Odeela ya aha mbụ?
Mpịakọta - ị na-eziga nnukwu olu nke ozi ịntanetị? Nnukwu email na-eziga nlezianya nleba anya nke ndị na - ezigara ozi.
content - ị nwere uhie uhie na mkpụrụokwu ị na-eji na email gị? You na-eziga nnukwu ozi ịntanetị na URL ọjọọ, ngalaba ndị a na-egosi maka malware, ma ọ bụ na ịnweghị njikọ wepu aha na ozi ịntanetị gị?
Mgbasa Ozi Nyocha nke Ahịa Cloud
Ọ bụrụ na ị na-eziga karịa 250,000 ozi ịntanetị kwa ọnwa na a Ahịa Cloudforce Cloud ahịa, ị kwesịrị ị na itinye ego na ha ziri ozi Nyocha ngwugwu, nke bụ a siri ike nhazi iji hụ na ị jirichaa napụta nke ndị ozi na igbe. Na Ezipụ Nyocha ngwugwu awade ihe ndia:
Ngalaba nkeonwe - Ngwaahịa a na - enyere gị aka ime hazie ngalaba eji zipu ozi-e. Ngalaba a na-eme dị ka Site Adreesị maka email gị na-eziga. Salesforce Marketing Cloud kwadoro email gị site na iji Sender Policy Framework (SPF), Sender ID, na Nyocha DomainKeys / DKIM.
Adreesị IP raara onwe ya nye - Ngwaahịa a nyere adreesị IP pụrụ iche na akaụntụ gị ka aha gị zuru oke nke gị. Ozi email niile ezitere na akaụntụ gị site na Cloud Cloud jiri adreesị IP a. Adreesị IP a na-anọchite anya ọtụtụ aha izipụ gị.
Zaghachi Njikwa Ozi - Ngwaahịa a na-achịkwa nzaghachi ị natara n'aka ndị debanyere aha gị. Nwere ike ekenye nzacha maka ọpụpụ ozi na akwụkwọ ntuziaka wepu aha gị.
Ọzọkwa, ngwugwu ahụ na-abịa Akaụntụ Brand, Ebe ahia igwe ojii na-eji Akaụntụ gị emepụta akaụntụ gị ziri ezi. Ngwaahịa a na-agbanwe njikọ njikọta na onyonyo ma wepu ihe niile gbasara Cloud Cloud na ihu ọma nke ngalaba gị.
Ezipụ Nyocha ngwugwu Video
Gị onwe ngalaba na-enyere ndị ISP aka inyocha yana yana ịkparịta ụka nke ọma na onye debanyere aha gị site na nzaghachi nzaghachi. N’ime ngwugwu nyocha nke Sender, ị ghazie ịtọlite ​​DNS gị iji nyere aka mee ka subdomains ole na ole maka izipu na nzaghachi, yana igodo nyocha. Na ndị nnọchi anya subdomain, a na-akpọkwa ha ndị nnọchi anya mpaghara, ị na-ebufe akụkụ nke ngalaba gị dị na ahịa Cloud dị ka akụkụ nke nhazi ngalaba gị. Ahịa Cloud na-eji subdomain akọwapụtara maka ihe omume kwesịrị ekwesị.
Eruchara nke ọma
@ Sample.domain.com MX Na-enye ohere ka ozi ịntanetị na-eziga iji sava igwe ojii
ibiaghachi ibiaghachi.sample.domain.com MX Egwu email eziga na bounces
zaghachi zaghachi.sample.example.com MX Na-enye ohere zaghachi ozi njikwa iji jikwaa nzacha ma zaghachi azịza na ụfọdụ adreesị
ahapụ hapụ.sample.domain.com MX Na-enye ndị debanyere aha ka ha wepu aha ha
image Image.sample.domain.com CNAME Ihe na ahịa igwe ojii ihe oyiyi sava
echiche lelee.sample.domain.com CNAME Ihe maka Ihu Igwe Igwe ahia ahia dika sava saiti Web
click pịa.sample.domain.com CNAME Ihe na Cloud Cloud Pịa URL maka nsuso pịa-throughs
peeji nke peeji nke.sample.domain.com CNAME Ihe na ahịa Cloud microsite na sava peeji sava.
igwe-oji igwe ojii.sample.domain.com CNAME Ihe na ahịa Cloud Cloud's Cloud peeji nke.
mta mta.sample.domain.com A Ihe na adreesị IP gị raara onwe ya
Sample.domain.com TXT Nyochaa DKIM na DK Họrọ
@ Sample.domain.com TXT SPF1 - SPF ọnọdụ na-enye ikike ibiaghachi ọbịa na mfrom njirimara
ibiaghachi ibiaghachi.sample.domain.com TXT SPF1 maka ibiaghachi usu
zaghachi zaghachi.sample.domain.com TXT SPF1 maka nzaghachi onye ọbịa
Gha acho inweta asambodo SSL nke asambodo gi maka ahia ahia ahia. Akaụntụ ahazi na SAP nke na-ejighi asambodo SSL na-egosi nchekwa ahịa Cloud Cloud na njirimara nke onyonyo na Onye Nwepụta Ọdịnaya. Mgbe ị gbakwunye onyonyo ahụ na email, URL dị na nchịkọta akụkọ na-egosi nhazi ngalaba ntọala gị na SAP. Nchịkọta njikọ na ibe ihe oyiyi oyiyi na-edepụta ngalaba ahaziri iche maka iji na ozi ịntanetị, ibe ọdịda, na ihe nchọgharị.
Adreesị IP na-ekpo ọkụ
Ozugbo edozichara ozi nyocha ziri ezi, izipu adreesị IP ga-adị kpoo ahụ ọkụ. A maara nke a dị ka IP Okpomoku. Nke a bụ n'ihi na ndị ISP enweghị aha jikọtara na adreesị IP gị. Ọ bụrụ n ’ibido izipu ihe niile site na nhazi ọhụrụ, enwere nnukwu nsogbu ị nwere igbochi. Imirikiti njikọ sitere na adreesị IP ọhụrụ bụ mbọ iji zipu spam na-achọghị ma ọ bụ ozi ndị ọzọ achọghị, yabụ ndị ISP na-enyo enyo na adreesị IP ọhụrụ na-ezipụ ozi.
Achọrọ enyemaka? Mụ na ndị ọrụ m na Highbridge amalitela ikpo okwu nke anyi, IP Ọkụ, nke na-ehicha data gị, na-ebute izipụ gị ụzọ, ma na-enye gị ndepụta mkpọsa na nhazi gị iji belata nsogbu ọ bụla nke ịnapụta yana iji meziwanye aha nnapụta gị.
Douglas Karr, VP nke Highbridge
Ndị ISP ndị kasị ukwuu na ndị na-eweta webmail na-atụ aro ka ị wulite aha izipu ozi na adreesị IP ọ bụla site na iji nwayọ na iji nwayọ ziga obere mpịakọta, wee jiri nwayọ mụbaa olu gị nke ozi na-achọsi ike n'aka ndị ọrụ ha. A na-akpọ izipu aha a dị ka okpomoku or na-azụ elu nke adreesị IP ọhụrụ gị.
Ebumnuche bụ iwulite ihe dị ka ụbọchị 30 nke ezipụ akụkọ ihe mere eme na data ka ndị ISP nwee echiche nke ozi na-abịa site na adreesị IP ọhụrụ gị. Oge ịgba ọsọ nwere ike iwe karịa ụbọchị 30 maka ụfọdụ ndị na-ezigara ya na obere oge maka ndị ọzọ. Ihe ndị dị ka nha ndepụta gị niile, aha njirimara, yana itinye aka na ntinye nwere ike imetụta oge ọ ga - ewe ka adreesị IP gị zuru oke.
Cloudgwé ojii na-atụ aro ka ị lekwasị anya na iziga ndị na-edebanye aha gị na ndị na-arụ ọrụ n'oge a dị oke egwu ebe ọ nwere ike ịbụ ntọala mbụ maka ndị ISP iji chọpụta adreesị IP onye na-ezipụ aha gị. Ramp elu gụnyere izipu ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ozi kwa IP kwa ụbọchị, yabụ ọ nwere ike ịdị mkpa iji mezie usoro izipu gị ugbu a dịka akụkụ nke usoro ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ chọọ enyemaka na ntinye nlekota igbe ozi ma ọ bụ chọọ enyemaka na ịhazi gị Ezipụ Nyocha ngwugwu, I nwere ike ịrịọ enyemaka iji mepụta ụlọ ọrụ ọhụrụ m, Highbridge. Anyi bu onye ahia ahia ahia ohuru ma anyi aru oru a otutu otutu otu. Anyị nwere ike ịrụ ọrụ na onye nnọchi anya Salesforce gị ma mee ka ị hazie nke ọma, kpoo ọkụ ma ziga ozi!
Tags: 250okakara akaụntụomenala ngalabaraara onwe ya nye ipnnapụtanhazi dnsaha njirimara emailesphighbridgeaha ọma ipip ọkụikpo ọkụahia igwe ojiionwe ngalabazaghachi njikwa ozindị ahịasapngwungwu ozi nyochaemail ssligbochi sslndị nnọchi anya mpaghara
IP Ọkụ: Jiri Ngwa IP a Kpoo Igwe Mee Ka Aha Ọhụrụ Gị